Ity Tontolo Ady ity na ny fomba hahatonga ny mpanjifa ho tia anao - Tetik'ady ara-barotra amin'ny Semper Expert
Ny tontolontsika amin'izao fotoana izao dia dokambarotra, tontolo an-dàlambe. Raha tsy misy dokam-barotra, dia tsy ilaina ny zavatra toy ny fahitalavitra, radio, na media sosialy. Tsy lazaina mihitsy hoe mila mandoa bebe kokoa ny zavatra ilaintsika isika. Ny 86% -n'ny mponina no mino fa ilaina ny dokam-barotra amin'ny famoahana votoaty malalaka anaty aterineto. Na dia izany aza, tsy manome mpividy ny zon'izy ireo hanelingelina antsika amin'ny dokam-barotra. Ireto manaraka ireto dia paikady efatra avy amin'i Oliver King, Semalt manam-pahaizana, izay tena afaka mampifaly ny mpanjifa.
Tsy misy na inona na inona izay manala ny mpanjifa mety ho toy ny mpivarotra mitsikera izay manery anao hanery anao hividy ity vokatra ity na amin'ny vokatra rehetra. Tena fanilihana goavana izany ary tena tsy mahomby raha ny fiovam-po. Ny mpanjifa dia afaka mampahatsiaro anao na manamarika ny fihetsika nataonao sy ny voadinao tsy hanelingelina anao na ny marika asehonao.
Ny fomba fiasa ara-tsosialy ankehitriny dia mifototra amin'ny fomba fiasa mifantoka kokoa amin'ny fampiasana fitaovam-pandevozana, izay tokony handinihina ny tetikady ara-barotra dizitaly . Ireo mpanjifany dia tokony hatao amin'ny fomba tiany haleha. Ny hany fomba hahatratraran'izy ireo dia ny fampiharana ny fitsikilovana sy ny fanadihadiana ara-tsosialy..Ireo fanampiana ireo amin'ny fametrahana fihetseham-po amin'ny mpanjifa mba hahafahan'ireo mpangalatra mitady azy ireo raha te hifanerasera amin'ny tena izy. Amin'ny alàlan'ny fanatsarana ireo lafiny amin'ny orinasa ireo, ny mpividy dia afaka mametraka ny ezaka SEO
Raha manan-danja manokana ny tenanao manokana, tsy azo atao ny mahafantatra hoe iza no mamaky lahatsoratra manokana, amin'ny fotoana ahafahany miditra aminy, ary ny zavatra hafa mety ho liana. Ny tambazotra teratany dia tokony hanampy amin'ny fanolorana toro-hevitra amin'ny votoaty izay mandrisika azy manaraka. Ny mpividy dia tokony hahafantatra fa ny toro-hevitra dia tokony hifanaraka amin'ny tsiron-tsakafo sy ny safidin'ny mpamaky iray. Raha ampidiriny ny rohy mankany amin'ny lahatsoratra mifandraika amin'ny zavatra liana amin'ny mpamaky, nefa tsy nahita izany, dia lasa loharano azo itokisana sy tsara ny tranonkala izay tsara ho an'ny SEO. Ny vokatr'izany dia mitazona avo roa heny ny mpitory ary atolotry ny mpividy entana tsiambaratelo fantatry ny fikarohana izay hahatonga azy ireo hiverina hiverina bebe kokoa.
Misy zavatra vitsivitsy izay mahasosotra ny mpividy rehefa tonga amin'ny marketing dizitaly:
Coupons izay mandrora ho an'ny zavatra novidin'izy ireo satria tsy misy ilàna azy na iza na iza mitokana na vola ho an'ny voafetra alohan'ny fongany.
Ireo doka miverimberina ao amin'ny Facebook ho an'ny entana na serivisy efa nividianany azy ireo.
Ny boaty fanontana mailaka izay miseho raha vao mahita ny votoatiny.
Tsy maintsy mampiasa marika nomerika ny mpividy mba hanohanana ireo mpanjifa mahatoky amin'izy ireo. Mety ho toa kely ny fientanentanana voalaza etsy ambony, saingy misy zavatra kely manampy. Noho ireo loharano tsy voafetra amin'ny zavatra mifandraika amin'ny zavatra tadiaviny dia aza omeny antony hisafidianana ny marika izay amidinao. Miaraka amin'ny fanamarinana avy amin'ny mpanjifa sy ny media sosialy, dia ataovy izay hahazoana antoka fa tokony hifanaraka tsara amin'ny tolotra rehetra ny serivisy.
Ataovy azo havaozina
Ny farany fa tsy ny kely indrindra dia ny mamorona votoaty izay manohina ny fihetseham-pon'ny olombelona. Ny fihetseham-po dia mpikatroka lehibe. Ny mpividy sasany dia mety maneso hoe ny fihetsikao mampihetsi-po dia mampihetsi-po, saingy tsy hohadinoin'izy ireo mihitsy izany amin'ny ho avy Source .